Toe-tsaina sy fiaina mila fanarenana… | NewsMada
Toe-tsaina sy fiaina mila fanarenana…
Par Taratra sur 02/11/2019
Fotoan’ny fanovana izao? Fanarenana ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ankapobeny… Ho tonga hatraiza? Latsaka an-katerena ny firenena. Tsy inona fa noho ny ataon’ny tena ihany. Izay no mahasoa na maharatsy. Ny fitantanana tsy mahomby, ny tany sy fanjakana tsy tan-dalàna, ny fisian’ny tsimatimanota, ny fanjakan’ny kolikoly, ny raharaham-pirenena ananan-kavana, ny firaisana tsikombakomba amin’ny ratsy, ny harem-pirenena gaboraraka, ny fanjakazakan’ny vahiny…
Iza no ndeha homen-tsiny? Na amin’izay heverina ho tsy inona aza, vokatry ny ataon’ny tena ihany… Manjaka, ohatra, ny tsy fandriampahalemana: na ny olon-dratsy no mihevi-tena ho zavatra, na tsy manao ny asany sy tsy mahazaka fanjakana ny mpitondra. Tanàna tsinona tsy ilaozan’adala. Tonga, ohatra, ny tondradrano na an-tanàn-dehibe aza, vokatry ny fanotofana tsy ara-dalàna tany, ny fanariana fako anaty tatatra… Ny ataon’ny tena ihany izany rehetra izany fa tsy azo ailika amin’itsy sy iroa.
Eny, na lalana mora simba amin’ny toetr’andro sy ny loza voajanahary aza, ohatra, mety noho ny ataon’ny tena ihany amin’ny asa alasafay, tsy manara-penitra, vonjy tavanandro… Koa raha atao ity hoe fanarenana amin’ity hoe fampandrosoana, efa vonona sy miara-dalana amin’izany ve ny toe-tsaina, ny fomba fiaina, ny fiaraha-miaina… ? Tsy izay aza ve no tena fiovana sy fanovana aloha? Fanarenana, fandaminana… Izay miova no afa-kanova, izay milamina no afa-kandamina, izay madio no afa-kanadio…
Fanariam-bola sy fandaniam-potoana ary hasasaram-poana ny fanadiovana io tatatra rehetra io, ohatra, raha mbola fanariam-pako ihany izany. Toy izany koa ny arabe fanasana fiara, fivarotana, fanariana ranon-dolana… Ny fakofakon-tsaina amin’ny fomba sy fahazaran-dratsy no mila diovina sy alamina aloha: mila fanarenana, fanorenana raha ilaina. Mby aiza? Mba tsy ho hasasaram-poana ny hoe fampandrosoana. Ny ataon’ny tena ihany tsinona no mahasoa na maharatsy, na toy inona ezaka amin’ity hoe fanovana.